Los Angeles mankany Lome, Togo tsy miato amin'ny Ethiopian Airlines
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Los Angeles mankany Lome, Togo tsy miato amin'ny Ethiopian Airlines
Ny fampifandraisana ny morontsiraka andrefana amerikana miaraka amina fijanonana any Afrika Andrefana no voalohany. Ny mpikamban'ny Star Alliance, Ethiopian Airlines, dia nandray ny hetsika ary nanova ny zotram-pitaterana maharitra lavitra avy any Addis Ababa mankany Los Angeles mba handehanana mamaky an'i Lome, Togo hatramin'ny 17 Desambra 2018 ary hanomboka làlana vaovao avy any Addis Ababa mankany Dublin amin'ny alàlan'ny Madrid hatramin'ny 15 Desambra 2018.
Ny fampifandraisana ny morontsiraka andrefana amerikana miaraka amina fijanonana any Afrika Andrefana no voalohany. Mpikambana ao amin'ny Star Alliance, Ethiopian Airlines, no nandray ny hetsika ary nanova ny zotram-pitaterana maharitra lavitra avy any Addis Ababa mankany Los Angeles handalo an'i Lome, Togo hatramin'ny 17 Desambra 2018 ary hanomboka làlana vaovao avy any Addis Ababa mankany Dublin amin'ny alàlan'ny Madrid hatramin'ny 15 Desambra 2018.
Ny zotra vaovao no ho tokana sy voalohany amin'ny karazany mampifandray an'i Afrika Andrefana amin'ny morontsiraka andrefan'i Etazonia amin'ny sidina mivantana.
Ny zotra vaovao mankany LAX amin'ny alàlan'ny LFW dia hiasa araka ny fandaharam-potoana etsy ambany: Flight
Andriamatoa Tewolde GebreMariam, CEO an'ny vondrona Ethiopian Airlines, dia nilaza fa, “Faly izahay fa hanomboka sidina mivantana lavitra hafa izay mitondra ny traikefan'ny mpandeha amin'ny sehatra vaovao amin'ny alàlan'ny fidirana ifandraisan'ny Afrika Andrefana sy ny morontsiraka Andrefana any Etazonia. Ao anatin'ny sidina misy antsika amin'ny làlana vaovao, ny mpandeha dia hankafy hatrany ny sarany voalohany, manome serivisy mpandresy amin'ny fiaramanidina Dreamliner B-787 nandroso indrindra. Mifanaraka amin'ny sori-dalanay fitomboana, ny Vision 2025, dia hanohy hanitatra ny tambajotra iraisam-pirenena midadasika izahay ary hamorona safidy fifandraisan-davitra tsara kokoa any Afrika ary koa eo amin'i Afrika sy ny sisa amin'izao tontolo izao. ”
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afrikanina, Ethiopian Airlines, dia nanitatra ireo toerana nokendreny iraisam-pirenena izay nahatratra mihoatra ny 116. Ny Manchester, Moskoa, Istanbul ary Mogadishu dia sasany amin'ireo toeran-kaleha vaovao natomboky ny seranam-piaramanidina tsy ho ela.
Mampiseho ny fizahan-tany Djibouti ao amin'ny World Travel Market London: voalohany